လူငယ်နှင့် ဂိမ်းစွဲလန်းမှု | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » လူငယ်နှင့် ဂိမ်းစွဲလန်းမှု
ယနေ့ခေတ်လူငယ်တော်တော်များများ ဂိမ်းဆိုင်တွေမှာစုနေတာ တွေ့ရတယ်။ အချိန်၊ပိုက်ဆံ၊အကျိုးရှိလှတဲ့ အရည်အချင်းတွေကို ဂိမ်းဆိုင်မှာပဲ ကုန်နေကြတာတွေ့ရတယ်ဗျာ…။တော်တော်များများ ဟာ ဂိမ်းကိုနေ့မအိပ်၊ညမအိပ် ဘဲကိုဆော့နေကြတာ။ ကျောင်းချိန်တွေလည်းမတက်၊ အိမ်အလုပ်တွေလည်းမကူ၊ အချိန်ပြည့် ဂိမ်းကိုပဲ ဆော့နေကြတာ အနာဂါတ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးအတွက် ရင်လေးစရာပါ။ မိဘကတော့ ကျောင်းစာအုပ်ဖိုး၊ကျူရှင်ဖိုး ပေးလိုက်ကြတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် လူငယ်တော်တော်များများကတော့ အဲဒီငွေတွေကို ဂိမ်းထဲမှာပဲ မြုပ်နှံလိုက်တြတယ်။ အစစအရာရာမှာ တစ်ခြားနိုင်ငံတွေထက် နိမ့်ကျနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံဟာ ဒီလိုပုံသာ လူငယ်တွေ ဖြစ်နေရင် တိုးတက်ဖို့ရာ မမြင်ဟု ပင်ဆိုချင်ပါတယ်။ အရေးကြုံရင် မြန်မာလူငယ်တွေ သက်လုံကောင်းနေဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေမှာ အသက် ၁၉၊၂၀ဆို အလုပ် လုပ်နိုင်နေကြပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာတော့ ဂိမ်းဆိုင်ထဲမှာ ရှိနေကြသေးတယ်လို့ ထင်ပါတယ်ဗျာ…။ အနာဂါတ်တာဝန်ကို လွဲပြောင်းယူကြမယ့် လူငယ်တွေ ပြင်ဆင်ချိန်တွေ ရှိပါသေးတယ်။ မောင်တို့ ကြိုးစားကြစမ်းပါကွာ…..တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းကို ယခုချက်ချင်းပင် လုပ်ဆောင်သင့်ကြပါတယ်ဗျာ….။
အင်း… ဘယ်လိုပြောရမလဲ… တခြား တိုင်းပြည်တွေနဲ့ ယှဉ်လျှင်တော့ … လူငယ်တွေရဲ့ တိုးတက်နှုန်း ကွာချင်ကွာလိမ့်မယ် … ဒါပေမဲ့လည်း … အများကြီး မမှန်းပါနဲ့ … အခြေနေက မတူလို့ပါ … လုပ်ကိုင်နိုင်ခွင့် အခွင့်ရေး မတူညီလို့ပါပဲ .. ။
ဂိမ်းကစားတာက မူးယစ်ဆေးသုံးတာ … ကာမဂုဏ်ခံစား ပျော်ပါးနေတာ ၊ သောက်စား မူးရစ်ရမ်းကားနေတာထက်စာလျှင်တော့ … တော်သေးတယ်လေ … ။
နွယ်ပင်ကတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဘီယာဆိုင်ထိုင်တာထက် ဂီမ်းဆိုင်သွားတာကို
ပိုပြီးသဘောကျတယ် . နေ့တိုင်းတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ ……….
ဂိမ်းမကစားနဲ့ဆိုရင် အချိန်ကို တစ်ခြား အကျိုးရှိအောင် မည်သို့မည်ပုံ အသုံးချရမည်နည်း?
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲ ဂိမ်းကစားပါတယ်… ဒါပေမယ့် ဂိမ်းအလွန်အကျွံကစားတာကို အားမပေးပါဘူး။
တစ်ခြား လုပ်စရာမရှိလို့ ဂိမ်းကစားကြတာ အားပေးပါတယ်… အနည်းဆုံး မကောင်းတာ လုပ်ဖို့ အချိန်မရဘူးပေါ့။ (အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ ကြည့်ပေးလိုက်တာ)
ဒါပေမယ့်… လုပ်စရာရှိတာ မလုပ်ဘဲ၊ ကျောင်းချိန်ပျက်၊ အလုပ်ပျက်၊ သင်တန်းပျက်၊ ကိုယ့်တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်း ပျက်စီးအောင်လောက်ထိ နေ့နေ့ညည ကစားတာကို အားမပေးပါဘူး.. (ဘ၀တူ သူငယ်ချင်းများ အားလုံးအတွက်ပါ။)
ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲ အချိန်တော်တော်များများ ကုန်ခဲ့ဘူးလို့ပါ။ အချိန်ဆိုတာ ပြန်မရပါဘူး။
ဂိမ်းဆော့တာလောက်ဆိုရင်တော့ သိပ်ပြသနာမရှိသေးပါဘူး။ ဂိမ်းစွဲလမ်း ပြီဆိုရင်တော့ တော်တော်ကြီးသွားပြီဗျ။ ပထမဆုံးအချိန်ကုန်မယ်။ ကျောင်းသားဆို ပညာရေးထိခိုက်လာမယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးအလုပ်ထဲဝင်သူဆို အလုပ်မှာထိခိုက်လာမယ်။ ပြီးရင် ကျန်းမာရေး (အထူးသဖြင့် မျက်စိ) ထိခိုက်လာမယ်။ ဘာတစ်ခုမှ ကောင်းကျိုးမပေးပါဘူး။ အီးတုံး (ဟွန့် နံလိုက်တာ ) (တားကချစ်လို့ စတာချိတ်ချိုးရဘူးနော်) ပြောသလိုဆို ရင်တော့လည်း အဲဒီအမြင်နဲ့ ဟုတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေတော့လည်း entertainment အနေနဲ့ ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စိတ်ထွက်ပေါက်တစ်ခုအနေနဲ့ ပဲဖြစ်ဖြစ်